The Ab Presents Nepal » “आमाको उपदेश” एक पल्ट अबश्य पढ्नु होस् र जरुर सेयर गर्नुहोस
“आमाको उपदेश” एक पल्ट अबश्य पढ्नु होस् र जरुर सेयर गर्नुहोस
एक सब्जी दोकान जहाँबाट म अक्सर सब्जी ल्याउने गर्छु ! जब म सब्जी लिन त्यहाँ पुगे सब्जिवाली साहुनी फोनमा कुरा गरि रहेको देखे: मलाई लाग्यो कि एकछिन बसेर साहुनीको कुरा सकिएसी केही सब्जी लिने ! साहुनीले पनि केही समय पर्खिन इसारा गरिन ! र म त्यहाँ उभिएर बसिरहे साहुनी ले कुरा गरेको मेरो कानले सुनिरहेको थियो!
साहुनी आफ्नो उस छोरिसंग कुरा गरिएको थिइन् जसको २/४ दिन अगाडि मात्र बिबाह भएको थियो !
साहुनीले भन्दै थिइन् ( सुन छोरी माइतीघरको याद आउँछ ठिक छ तर अब त्यो घर तिम्रो हो ) तिमिले अब आफ्नो सारा ध्यान घरमा लगाउनु पर्छ ! र घरी-घरी फ़ोन गर्ने काम पनि नगर्नु लुकेर त झन फोनै नगर !जब यहाँ फ़ोन गर्न मन हुन्छ सासू वा श्रीमान् को अगाडि गर्नु !
तिमिले आफ्नो फ़ोनमा मेरो कल आउँछ भनी कहिले प्रतीक्षा नगर्नु ! मलाई जब तिमिसंग कुरा गर्न मन लाग्छ तब म तिम्रो सासुको नम्बरमा कल गर्छु ! तब तिमी पनि म संग बोल्नु , छोरी अब तिमी श्रीमानको घरमा छौँ माइतीघरमा जस्तै साना-सानो कुरामा रिसाउने ठुस्किने नगर्नु , सहनेशक्ती बढाउनु !
आफ्नो घर कसरी चलाउने हो यो सबै अब आफ्नो सासुसंग सिक्नु! एउटा् कुरा ध्यान राख्नु इज्जत दिन जान्यौभने इज्जत पाउँछौं ! ठिक छ खुसीसंग बस्नु !मैले प्रसंशा को अर्थमा भने (साहुनी तपाईंले धेरै सुन्दर शिक्षा दिनुभयो छोरीलाई )
साहुनी ले भनिन्: भाइ , आमाले छोरिको परिवारमा अनावश्यक दखल दिनु हुँदैन ! उसले आफ्नो घरको कुरा बिनाअर्थ यताको कुरा उता र उताको कुरा यता पनि गर्नु हुँदैन ! त्यहाँ हुने समस्याको हल आफ्नै खोज्न सक्नुपर्छ !
म ति देबि, सब्जिवाली साहुनीको मुख हेरि रहे , सबै आमा ले उहाँले जस्तै सोच्नुपर्छ ताकी छोरिले आफ्नो घरलाई खुद आफ्नो घर सम्झिउन !!
साभार सामाजिक संजाल – फेसबुक